သင့်ရဲ့ဖုန်းကို ဘယ်လိုသန့်ရှင်းအောင်ထားမလဲ? -
ဒီရက်ပိုင်းတွင်း Social Media တွေမှာ မြင်သမျှက COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တာတွေချည်းပဲ ဖြစ်နေမှာပါ။ ဒီရက်ပိုင်း လူတွေအပြောများလာကြတဲ့ လက်ကိုသေချာဆေးတာ၊ ခဏခဏဆေးတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ ! ဖုန်းကနေတစ်ဆင့် ကူးရင်ရောတို့ ဖုန်းက ဟိုချဒီချနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကမပါလာနိုင်ဘူးလားတို့စတာတွေလည်း အပြောများနေပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ဖုန်းကို ဘယ်လိုမျိုး သန့်ရှင်းအောင် ထားမလဲဆိုတာလေးကို နည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ်။
Apple ကနေပြီးသူတို့ရဲ့ iPhone အသုံးပြုတဲ့သူတွေကို isopropyl alcohol (70%) ပါဝင်တဲ့ အဝတ်စတွေ ဒါမှမဟုတ်Clorox Disinfection Wipes တွေသုံးပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတာက အိုကေပါတယ်ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ Support Page မှာUpdate လုပ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက ဆပ်ပြာမှုန့်တွေ၊ ရေတွေသုံးပြီး ဆေးကြောတာတွေ၊ အားသွင်းပေါက်လိုမျိုးနေရာတွေကို ရေငွေ့ရိုက်စေတာတွေတော့ မပြုလုပ်သင့်ပါဘူးလို့ ဆိုထားပါတယ်။(https://support.apple.com/en-us/HT204172)
ဒါ့အပြင် Apple ကနေပဲ မာကြောတဲ့၊ စိမ့်ဝင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ မျက်နှာပြင်မျိုးတွေမှာ အပေါ်ကပြောထားသလိုdisinfectant ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ် ဒါပေမဲ့ ရက်ထည်တွေ၊ လယ်သာတွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေမှာတော့ မသုံးသင့်ပါဘူးလို့ ဆိုထားပါတယ်။ ကလိုရင်းတွေ၊ ဆပ်ပြာတွေ စတာတွေက ကိုယ့်ရဲ့devices တွေကို ပျက်စီးစေပြီး တခြား သန့်ရှင်းရေး ပစ္စည်းတွေနဲ့လည်း သန့်ရှင်းရေး မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။
ဒါဆို ကိုယ့်ဖုန်းကို သန့်ရှင်းရေး ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
စိတ်အချရဆုံးနည်းလမ်းကတော့ Microfiber cloth လို့ခေါ်တဲ့ မျက်မှန်တွေမှာ ပါလေ့ရှိတဲ့ အဝတ်မျိုးလေးတွေနဲ့ဖုန်း မျက်နှာပြင်ကို သုတ်ပေးတာတွေ လုပ်လို့ရပါတယ်။ နောက်ကျောဘက်က Cover တပ်ကိုင်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ ဆေးကြောလို့ရတဲ့ Cover မျိုးဆိုရင် Cover ကို ချွတ်ပြီး ဆေးကြောတာမျိုး လုပ်လို့ရပါတယ်။ အဓိကကတော့ ကိုယ့်ဖုန်းကနေတစ်ဆင့် ကူးစက်တာထက် ဖျားနာနေတဲ့လူတွေနားကို မသွားပဲနေမယ်၊ လက်ကို ပုံမှန်ဆေးမယ် ဒါဆိုရင် ကိုယ့်ဖုန်းကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာထက် အများကြီး ကူးစက်နိုင်ချေ လျော့ကျသွားမှာပါ။
ဖုန်းကို ဘယ်လိုမျိုး သန့်ရှင်းရေးတွေ မလုပ်သင့်ဘူးလဲ?
တံခါးပေါက်တွေ၊ ပြတင်းပေါက်တွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့ မှန်ကြည်ဆေးရည်လိုမျိုးနဲ့ မလုပ်သင့်ပါဘူး။
မီးဖိုချောင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ မလုပ်သင့်ပါဘူး။
အရက်ပြန်ပါတဲ့ Rubbing alcohol အစတွေနဲ့ မသုတ်သင့်ပါဘူး သင့်ဖုန်းရဲ့ protective coating ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
Makeup Remover လို့ခေါ်တဲ့ မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေးတွေနဲ့လည်း မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။
ပန်းကန်ဆေးဆပ်ပြာ၊ လက်ဆေးဆပ်ပြာတွေနဲ့လည်း မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။
နောက်တစ်ခုကတော့ Vinegar လို့ခေါ်တဲ့ ရှာလကာရည် စတာတွေနဲ့လည်း မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။
တစ်ခုမေးစရာ ရှိနိုင်ပါတယ်၊ IP67 / IP68 Rating ပါတဲ့ ဖုန်းတွေဆိုရင်ရော ရေဆေးတာတွေဘာတွေ လုပ်လို့ရလားဆိုတာပါ ??
CNET ရဲ့ အဆိုအရရော Smartphones တွေမှာပါလေ့ရှိတဲ့ Warranty Terms and Conditions တွေအရရော ရေစိုခံပါတယ်လို့ Rating ပါတဲ့ ဖုန်းတွေဖြစ်ဖြစ် မပါတဲ့ ဖုန်းတွေဖြစ်ဖြစ် ရေဆေးတာတွေ ဆပ်ပြာနဲ့ဆေးတာတွေကိုrecommend မလုပ်ချင်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ Rating တွေဟာ ဓါတ်ခွဲခန်းထဲမှာ စမ်းသပ်တဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ စမ်းသပ်ပြီး Rating ပေးထားတာ ဖြစ်တာကြောင့်မို့ ရေနဲ့ အခြား အရည်တွေ ဝင်လာလို့ ပျက်စီးတယ်ဆိုရင် Warranty ရရှိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
UV Light ကိုရော သုံးသင့်လား?
တော်တော်လေး ခေတ်စားလာပြီး ဒီရက်ပိုင်းတွင်းမှာ Hot ဖြစ်လာတာက UV Light နဲ့ ဖုန်းကို ပိုးသတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပါ။ အပေါ်ကပြောထားတဲ့ နည်းတွေနဲ့ မလုပ်ချင်ဘူး၊ ဒီ UV Light နဲ့ဆိုရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်မိတယ်၊ ဝယ်ထားရင် ကောင်းမယ်ဆိုပြီး တွေးမိရင်တော့ ကြော်ငြာတွေကြောင့် ဝယ်ချင်ရင်လည်း ဝယ်လို့ရသလို သုံးလို့လည်းရပါတယ်။ UV Light က တခြား ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို သေစေနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ ဒီ COVID-19 အပေါ်ကို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိမလား မရှိဘူးလားဆိုတာကိုလည်း မသိသေးပါဘူးလို့ Rutgers University ရဲ့ Department of Food Science ရဲ့ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Donal Schaffner က ပြောထားပါတယ်။ Effective ဖြစ်တာတွေ မဖြစ်တာတွေအသာထားလို့ အဲ့ဒီ UV Light Smartphone Sanitizer တစ်ခုရဲ့ စျေးနှုန်းက အနည်းဆုံး (၁) သိန်းနဲ့အထက်မှာ ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့ Win Mobile World ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းတွေ၊ Digital Devices တွေကိုအပေါ်မှာ ပြောထားတဲ့အတိုင်း တတ်နိုင်သလောက် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပြီး အဓိကကျတဲ့ လက်သန့်ရှင်းဖို့၊ အပြင်ကပြန်လာတိုင်း အများအသုံးပြုတဲ့နေရာတွေက ပစ္စည်းတွေ (ဥပမာ – လှေကားလက်ရမ်း၊ ဓါတ်လှေကား ခလုတ်၊တံခါးလက်ကိုင်) ကို ကိုင်တွယ်ပြီးတိုင်း လက်ဆေးဖို့၊ လက်ကိုမဆေးကြောမသန့်စင်ဘဲ မိမိနှာခေါင်း၊ ပါးစပ်နဲ့မျက်နှာတို့ကို ကိုင်တွယ်ခြင်း မပြုဖို့၊ အိပ်ရေး၀၀အိပ်ပြီး ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ဖို့၊ အစားအသောက်ပုံမှန်စားဖို့နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပြီး တတ်နိုင်သလောက်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဗျ။
Credit Post – Win Mobile World
Previous App Store ကို Myanmar Region ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပြီ
Next iOS 13 မှာ ပါဝင်တဲ့ Find My အကြောင်း တစေ့တစောင်း